मन्त्री बन्न माओवादी छाडेका ४ जनाकाे सांसद पद खाेसिँदै, के हुन्छ मन्त्री पद ?
मुख्य पृष्ठराजनीतिमन्त्री बन्न माओवादी छाडेका ४ जनाकाे सांसद पद खाेसिँदै, के हुन्छ मन्त्री पद ?
काठमाडौं / नेकपाकाे आन्तरिक विभाजनमा प्रचण्ड-नेपाल समूह छाडेर केपी ओली समूहमा लागेका ४ जना मन्त्रीकाे सांसद् पद खुस्किने भएकाे छ ।
पहिले नेकपामा विवाद हुँदा ओली समूहमा लागेका उनीहरू माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका हुन् । सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट तथा गौरीशंकर चौधरी पार्टी एकता खारेज हुँदा माओवादीमा नफर्की नेकपा एमालेमै रहेका थिए ।
मन्त्री पदकै लाेभका कारण ओलीलाई नछाेडेका नेताहरूलाई अन्ततः माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेकाे निर्णय गरेकाे छ ।
उनीहरुलाई पार्टीमा फिर्ता आउन माओवादी केन्द्रले अग्रह गरे पनि नफर्कने बताएपछि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले दल त्याग गरेको निर्णय गरी त्यसको सूचना संसद् सचिवालयलाई दिएको हाे ।
संसदीय दलले दिएको सूचना संसद बैठकमा सभामुखले पढेपछि उनीहरुको पद रिक्त हुने छ ।
‘यस दलका केन्द्रीय समिति सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र प्रदेश समिति सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गौरीशंकर चौधरीले दल त्या गरेको निर्णय भएको हुँदा सो दल त्याग गरेको सूचना नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) प्रतिनिधि सभा संसदीय दलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका छौं’, ‘मंगलबार माओवादी केन्द्रले संसद सचिवालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ऐ दफा ३४ (२) ले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित सदन तथा सभामा समेत पेश गर्नु हुन अनुरोध छ।’
के हुन्छ मन्त्री पद ?
नेपालकाे संविधान अनुसार कुनै पनि व्यक्ति मन्त्री बन्नका लागि सङ्घीय संसद्काे सदस्य हुनुपर्छ । तर सांसद नभएकाे व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्छ । तर त्यस्ताे व्यक्तिले मन्त्री भएकाे ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्‍काे सदस्यता लिइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यस्ताे अवस्थामा चारै जना मन्त्रीहरूले आगामी ६ महिनाभित्र सांसद् निर्वाचित भइसक्नुपर्छ या त ६ महिनापछि उनीहरूकाे मन्त्री पद स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ ।
‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ’, संविधानमा लेखिएकाे छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ । साे अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।’